पैसा गन्दा झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन यस्ता गल्तिहरु ! धर्म-संस्कार - Kohalpur Trends
पैसा गन्दा झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन यस्ता गल्तिहरु ! धर्म-संस्कार
पैसा गन्दा झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन यस्ता गल्तिहरु !प्राय मानिसहरु जथाभावी रुपमा नोट /पैसाहरु राख्ने गर्छन्। तर यसो गर्नुलाई हिन्दुधर्मग्रन्थहरुले वर्जित गरेको छ। धेरै होस् अथवा थोरै, आखिरमा धन सम्पति भनेको धन सम्पति नै हो। त्यसैले यसलाई जथाभावी रुपमा फल्ने या राख्ने गर्नु हुदैन। भनिन्छ धन सम्पतिमा माता लक्ष्मी बास हुन्छ, धार्मिक मुल्य मान्यता अनुसार लक्ष्मीको अपमान गर्नु ठूलो पाप हो । वास्तुशास्त्रका अनुसार पनि यदि अत्यधिक मात्रामा धन सम्पति भएको मानिसको हातमा परेको पैसा बचिरहेको छैन भने उक्त मानिसमा वास्तुसंग सम्बन्धित दोष भएको हुन सक्छ।
-कहिलेकाही हातबाट नोट खसेको खण्डमा त्यसलाई हातले उठाई शिरले ढोगेर मात्र पर्समा राख्नु राख्नुपर्छ। यदि यसो नगरेको खण्डमा भविष्यमा आर्थिक समस्या झेल्नु पर्ने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ।
-आफ्नो पैसा राख्ने पर्समा भुलेर पनि खानेकुराहरु राख्ने गर्नु हुदैन।
The submit पैसा गन्दा झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन यस्ता गल्तिहरु ! धर्म-संस्कार appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: आज बिहिबार भगवान विष्णुको पूजा, व्रत बस्दा यस्ताे सफलता मिल्नेछ …? (पूजा विधिसहित)
Next Next post: कलंकीमा दुई वटा ट्रक ठोक्किँदा ३ जनाको मृत्यु